Archive du 04-nov-2021
Tombotsoan’ny Ravinala Airports Niaka-pofona ny Depiote Brunelle…
Mandeha ny tatitry ny fanadihadiana parlemantera mombana toe-javatra samihafa eto amin’ny firenena, ka an’isan’ny lohalaharana ny raharaha Ravinala Airports,
Mihinana am-bolony loatra
Manamarika ny fiainam-piarahamonina misy antsika ankehitriny ny fihinanana am-bolony matetika. Toa tsy manana fotoana hisainana sy handinihana intsony, fa zary maika hitsara sy handray fanapahan-kevitra.
Ampamoaka volabe Tsy marina io resaka “prime” io, hoy ny Jirama
Niparitaka nanomboka omaly taratasy miendrika antontan-kevitra voalaza fa famoaham-bola teo anivon’ny Jirama, ka isan’ny niaingan’io Atoa Mahery Lanto Manandafy na i “Malama”,
Fanendrena «Governora » tsy ara-dalàna Lasa fitaovana politikan’ny fitondrana ny HCC
Tsy mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana saingy ninian’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) nankatoavina ny « Governora ».
Tsy mety manasonia ny mpiasan’ny ministera Mihitsoka tanteraka ny fanondranana vato sarobidy
Mihitsoka tanteraka ny fanondranana vato sarobidy amin’izao fotoana izao satria tsy mety manasonia ny mpiasan’ny Minisitera.
Kongresy any Morondava Ho fampiraisana ireo Paramed rehetra
Manitsaka ny andro fahatelo ao Morondava anio ny Zaikabe Nasionaly tanterahan'ny Paramedy izay hifarana rahampitso zoma.
Fivarotana zaza varira Voafandriky ny polisy ny lehilahy 3
Lehilahy miisa 02, sy mpitandro filaminana am-perin’asa 01 no voasambotry ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny DRSP Anosy ny 01 novambra lasa teo noho ny fitanana an-keriny sy fivarotana zaza varira.
Andranovelona Ilafy Fijaliana ny resaka rano
Velon-taraina ireo mponina mianavaratr’Antananarivo, ny marimarina kokoa dia iny Andranovelona Ilafy sy ny manodidina azy iny manoloana ny fiantraikan’ny tsy fisian’ny rotsak’orana hatramin’izao.
Fanjakana tao anatin’ny 60 taona Ity no feno tontakely sy be kolikoly indrindra ?
Tsy finiavana hitsikera na sanatria fankahalana be fahatany, fa ankoatra ny tamin’ny tetezamita, dia tamin’ity Fanjakana faharoa entin-dRajoelina ity no be indrindra ny raharaha kolikoly sy afera maloto anaty Fanjakana.
Fondation Céline - Didier Ratsiraka Ho santarina amin’ny fotoam-bavaka ny fijoroany
Vavaka entina hisaorana sy hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra no hanokafana ny fitsanganan’ny Fondation Céline-Didier Ratsiraka etsy amin’ny Saint Michel Amparibe anio.
Hery Rajaonarimampianina Mety tsy ho kandida amin’ny 2023
Mety tsy ho kandida ho filoham-pirenena intsony ny filoham-pirenena teo aloha, Hery Rajaonarimampianina, raha ny loharanom-baovao iray tsy mbola ofisialy voaray omaly,
Mpiasan’ny SECREN Antsiranana Mitaky ny fialan’ny Tale Jeneraly Ntsay Abel
Nangotraka ny grevin’ny Mpiasan’ny SECREN (Société d’Etudes, de Construction et de Réparation Navale ) any Antsiranana ny talata teo.
Haintrano goavana tany Tamponala Nitondra fanampiana ny Orange Solidarité Madagascar
Nitondra fanampiana ho an’ireo fianakaviana lasibatry ny haintrano goavana tany amin’ny Kaominina Ambanivohitr’I Tamponala ny Orange Solidarité Madagascar ho fanehoana fa orinasa tsy manadino,
Fahasalamam-bahoka Nomena fiofanana ireo mpitantana hopitaly
Nomena fiofanana ireo mpitantana ny hopitaly eto amintsika. Etsy amin’ny INSPC Mahamasina, no hanatanterahana izany, hetsika hifarana ny Sabotsy 06 Novambra ho avy izao
Fifanolanana ara-tany etsy Nanisana Milaza hanao hetsi-pitakiana ireo vahoaka
Manomana hetsika ho fitakiana ny fanatanterahana ny fampanantenana nataon’ny mpitondra taminy ny vahoaka voakasiky ny olana ara-tany amin’ny Minisiteran’ny fambolena ao etsy Nanisana Boriborintany faha-5.
Mahajanga Tratra ilay teratany vahiny mpamatsy rongony
Lehilahy miisa roa ka tera-tany vahiny ny iray no voasambotry ny Polisy avy ao amin’ny UIR Mahajanga ny 02 novambra lasa teo tokony ho tamin’ny 10ora alina rehefa nahatrarana zava-mahadomelina.
Orinasa MIMOZA BTP mpanao làlana Milela-paladia amin’ny Fanjakana mba handoa ny volany
Nanamafy ny antso avo amin’ny mba handoavan’ny Fanjakana ny tambin’ny asa fanamboaran-dàlana tao amin’ny ACMIL (Academie Militaire Antsirabe) ny Orinasa MIMOZA BTP Sarl omaly,
Savorovoro teny Mahazo sy Ambohimahitsy Nidoboka am-ponja ireo olona nisambotra ankizy
Niakatra fampanoavana omaly 03 novambra ny raharaha savorovoro teny Mahazo sy Ambohimahitsy ny alatsinainy 01 novambra lasa teo.
Fanendahana nanakaiky ny Hotely Manga 67 ha Vao 16 taona monja ny iray tamin’ireo jiolahy
Tovolahy miisa 03 no voasambotry ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP7 teny amin’ny manodidina ny hotely Manga 67 ha, ny alakamisy 28 oktobra teo.
Manakambola Ambatondrazaka Manahirana sahady ny rano miakatra
Taorian’ny firotsahan’ny orana tany an-toerana omaly tolakandro dia efa manahirana ireo fiarakodia, indrindra, ireo mpandeha tongotra sy mpampiasa iny lalana manjohy ny eo amin'ny "radier" Manakambola,
Nitokona indray ny mpiasan’ny CTC Tsy mivoaka ny karama raha tsy takiana hatrany
Nitokona teo an-tokontanin’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka etsy Ambohidahy indray omaly ireo mpiasan’ny CTC Hopital Hotel miasa eto Antananarivo ary nanao fanambarana
Vondrona parlemantera TIM Fetra Ralambozafimbololona no filoha vaovao
Nivory tao amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena etsy Tsimbazaza ireo solombavambahoaka lany tamin'ny antoko politika Tiako I Madagasikara omaly.
Nini Colbert, Benny, Bebey Hampirevy etsy amin’ny Piment café
Izaho sy Benny ihany no mpikamban’ny tarika Lolo sy ny tariny eto Madagasikara amin’izao fotoana izao, hoy i Bebey, fa noho ity resaka krizy ara-pahasalamana tsy mety misava ity moa dia manahirana